ဖိနပ်နှင့်သားရေအလုပ်သမားများပြင်ဆင်ခြင်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှုနမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ဖိနပ်နှင့်သားရေအလုပ်သမားများပြင်ဆင်ခြင်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှုနမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 908 views
စုဝေး, ဆင်ယင်, သို့မဟုတ်သားရေနှင့်သားရေကဲ့သို့ပစ္စည်းများ restore, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်အိတ်ကိုများအတွက်အဖြစ်, ဖိနပ်.
နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ကြောင်းညာဘက်ထွက်စတိုင်များ Cut, ဒြပ်စင်သို့မဟုတ်ဖော်ပြထားတယ်, ကတ်ကြေးလျှောက်ထား, ညှပ်, ဓါး, သို့မဟုတ်စက်ကလစ်.
တိုးတက်, န့, သို့မဟုတ် features တွေ-အဆိုအရသားရေထုတ်ကုန် restore, ချုပ်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်နှင့်နှောင်ကြိုးသုံးပြီး, ပစ္စည်းကိရိယာများဇာ, လက် tools တွေကပ်, သို့မဟုတ် rivets.
စီစဉ်ခြင်းနှင့် adhesive သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကျွန်းသစ်အဖြစ်ချုပ်အရင်းအမြစ်များကို, သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများ, သိုးမွေး, buckskin, ဒေသများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်.
အရောင်, အလိုရှိသောဖြစ်ကြောင်းရလဒ်များရှိသည်သို့မဟုတ်ပြည့်နေပါသည်မှကွဲပြားခြားနားသောအရင်းအမြစ်များကို, တိုးတက်, အရောင်, စာနယ်ဇင်းများ, အပ်ချုပ်, သားရေ mark သို့မဟုတ်ထွင်း, ပုံစံမျိုးစုံ, သို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းများ.
ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ပုံစံများကို Select လုပ်ပါ, နှင့် cutout ခံရဖို့ထုတ်ကုန်ပေါ်သို့ပုံစံများခြေရာကောက်.
အဆိုပါဖိနပ်ခွအေနအေဆီသို့သစ်ကိုစစျဆေးနှင့်ဒေါက်၏အနားချုံ့ခြင်းအားဖြင့်အဖြစ်သာ costume နှင့်များသောအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောဖိနပ်.
န်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ဆုံးခနျ့မှနျးသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် Sneaker သို့မဟုတ်ဖိနပ်ပြုပြင်အပါအဝင်ထုတ်ကုန်မေးမြန်းပြီး, နှင့် client များအနေဖြင့်ကုန်ကျစရိတ် get.
Boot တက်မှစော်ကားခြင်းကိုဆက်လက် Add, ပန့်များနှင့် outsoles အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖိနပ်ဝတ်, နှင့်အထက်.
အင်္ဂတေ, လက်သည်း, သို့မဟုတ်ဖိနပ်မှဒေါက်ဖိနပ်နဲ့အောက်ဆုံးချုပ်.
တစ်ဦးဓါးတွေနဲ့ Form ကိုဖိနပ်ဒေါက်, နှင့်ရွှံ့သည်ဤချောများအတွက် buffing ဘီးကျော်.
Restore သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုခွကေိုညှစ်ထုတ်လိုက်, ဖိနပ် Sneaker ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများလျှောက်ထား, ချုပ်, buffing နှင့်အခြား Boot တက်ပြုပြင် devices များ, နှင့်ဂီယာ.
ဖန်တီး, modify, နှင့်ဆရာဝန်များနှင့်အညီအပူသို့မဟုတ်ပွနျလညျထူထောငျဖိနပ်ပြုပြင်’ ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ် specialneeds ခြေပြဿနာများနှင့်အတူလူများအတွက်ပစ္စုပ္ပန် Sneaker modify.
ဥပမာဘောလုံး MITT များအတွက်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်, နှင့်စည်, အိတ်, ဖိနပ်, ကုန်းနှီး, ခါးပတ်, ပိုက်ဆံအိတ်.
သားရေရဲ့ texture ကိုစိစစ်ရန်, အရိပ်, နှင့်ကြာရှည်ခံမှုကြောင့်ကွဲပြားတဲ့ function များအတွက်လုံလောက်သောကြောင်းသေချာစေရန်.
ဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်များစစ်ကြော, နှင့် created ခံရဖို့ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်တိုင်းတာယူ, အလုပ်သမား calipers, တိပ်လုပ်ရပ်များ, သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ.
အပြစ်အနာအဆာတို့အတွက်ဆောင်းပါးများကိုစစ်ကြော, နှင့်အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးဖြစ်ကြောင်းဒေသများကိုဖယ်ရှား, လက်-tools တွေကိုအသုံးချဖို့.
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့မဟုတ်အိတ်ကပ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့်သံမဏိလက်ဝတ်ရတနာတွေကို embed သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်, စီမံခန့်ခွဲ .
အခွအေနေ, အချပ်, ထည့်သွင်း, နှင့်လုံခြုံ padding တွေက, padding ကို, သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ချောင်းကိုလျှောက်ထားသို့မဟုတ်ပူးပေါင်းမည်.
စားသုံးသူသတ်မှတ်ချက်များ, နှင့်အလုပ်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်နေရာချထားပုံစံများ, အင်္ဂတေမှို, သို့မဟုတ်ပုံစံများကိုဆောင် ခဲ့., တိုင်းတာသုံးပြီး, စတိုင်များ.
ဝတ်စုံအဘို့ဝယ်လက်အကဲဖြတ်ရန်, တည်ဆောက်ဖြစ်လာဖို့ဖိနပ်ဤမျိုးနှင့်အတူဆွေးနွေးရန်, သားရေအရည်အသွေးကိုအပါအဝင်အဆိုပြုသတင်းအချက်အလက်များ.
ဖိနပ်တိုးချဲ့, စိတျအပိုငျးအပိုငျးပိုငျးမြားအပါအဝငျနှင့်ခေါက်နှင့် dampening, တစ်ချိန်ညှိဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲအသုံးချဖို့.
ဖိနပ်ပေါ်သို့ဖနောင့်-and ခြေချောင်း cleats ခွေသညျး.
ရာထူး Make, ဖနောင့် pads, နှင့်စားသုံးသူ၏ရုပျပုံရေးဆှဲကနေခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့’ ခြေဘဝါး.
Resew အဆစ်, နှင့်အလယ်ပုံသို့မဟုတ်အိတ်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်လိပ်စာများကိုအစားထိုး.
အခြားလူများအခိုင်အမာအရာကို active-နားထောင်ခြင်း-တင်ပြမြေတပြင်လုံးအာရုံစူးစိုက်မှု, လုပ်ခံရအသေးစိတ်နားလည်ရန်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်လာပြီ, သင့်လျော်သောအဖြစ်ကိုအံ့ဩကိစ္စများ, အစားမမှန်ကန်ကြောင်းအချိန်များတွင် mesmerizing ထက်.
ရလဒ်များ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန် Criticalthinking-အလုပ်သမားအကြောင်းပြချက်နှင့်ဆင်ခြင်ခြင်း, ကိစ္စများမှအခြားရွေးချယ်စရာကုစားသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
မဟာဗျူဟာ-အလုပ်သင်ယူခြင်းနှင့်ထိုပြဿနာကိုနည်းပြတငျပွ educationORinstructional ချဉ်းကပ်မှုနှင့်နည်းစနစ်ကောက်နေသို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သောကိစ္စများကျွမ်းကျင်လာသောအခါ.
အပိုဆောင်းလူများ၏ခြေရာကောက်-CheckingORDetermining လုပ်ဆောင်ချက်ကို, မိမိကိုယ်ကို, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကကုစားလုပ်ရပ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ဖို့.
လူမှုသူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့် othersI တုံ့ပြန်မှုမသိမဟုတ်သိနားလည်နိုင်စွမ်းကို-ဖြစ်ခြင်းနှင့်အသိပညာ.
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ညှိနှိုင်းရေး-ပြောင်းခြင်းလုပ်ရပ်များ’ လုပ်ရပ်များ.
အဆင့်မြင့်ရှုပ်ထွေးပြဿနာများပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်ရွေးချယ်စရာထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အဖြေကိုလျှောက်ထား related ကြောင်းအချက်အလက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်.
စစ်ဆင်ရေးသုတေသန-လေ့လာလိုအပ်ချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များတစ် layout ကိုအောင်.
installation-Installing tools များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုး, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ် packages များ.
မြောက်မြားစွာဖြစ်ကြောင်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း programming-ထုတ်လုပ်ကွန်ပျူတာ applications များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-လေ့လာခြင်းသည်အခြားနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုစစ်ဆင်ရေး, နာရီမျက်နှာပြင်, သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပစ္စည်းထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်သေချာဖြစ်.
ပစ္စည်းကိရိယာဂီယာအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို Maintenance-ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်အခါ upkeep ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုလိုအပ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း.
operating နှင့်မဆိုနှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ကြောင်းပြဿနာများ၏ troubleshooting-ကိုစူးစမ်းအကြောင်းတရားများ.
လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးချဖို့ပြုပြင်တာတွေ-ကိုပြုပြင်တာတွေ devices များသို့မဟုတ်စက်တွေ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏သုတေသန-ပွုလုပျခွငျးစာမေးပွဲနှင့်စမ်းသပ်မှုများ, န်ဆောင်မှုများ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လုပျထုံးလုပျနညျး.
analysis-ကိုစူးစမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏မျိုးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သောအရာကိုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမြားတှငျပွောငျးလဲသှားရာလမျး, အခြေအနေများ, နှင့် setting ကိုအကျိုးခံစားခွင့် impact နိုင်ပါတယ်.
နည်းလမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်-ဖော်ထုတ်ခြင်းခြေလှမ်းများသို့မဟုတ်ညွှန်းကိန်းများနှင့်စက်သင့်လျော်သောသို့မဟုတ် performance ကိုမြှင့်တင်ရန်အလေးအနက်ထားလိုအပ်သောအပြုအမူများ၏ပစ်မှတ်များနှင့်အညီ.
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု-ထိန်းချုပ်ခြင်းအခြားသူတွေ’ ကာလနှင့်လည်းပုဂ္ဂလိကကာလ oneis.
ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲပိုက်ဆံခြောအလုပ်ပြုသောအမှုရှိသည်ဖို့မည်သို့အသုံးချမည်ကိုအရင်းအမြစ်များ-ဆုံးဖြတ်, ဤအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်. အရောင်း.
ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများ-ရယူနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုများအတွက်မြင်နေ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, devices များ, နှင့်ထုတ်ကုန်တိကျတဲ့ function ကိုလုပျဆောငျဖို့လိုအပျ.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-stimulation ၏အုပ်ချုပ်ရေး, ကို, သူတို့လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းကလူညွှန်ပြ, အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကွဲပြားခြားနားသွား.
အောင်မြင်မှုများ / ကြိုးစားခြင်း – 81.57%
ဇွဲ – 77.67%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 81.07%
စီမံခန့်ခွဲမှု – 76.72%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 87.66%
အခြားသူများနှင့်စပ်လျဉ်းကိစ္စ – 85.96%
ယဉ်ကျေးမှု Direction အဖွဲ့ – 83.75%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 78.55%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 78.61%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 90.41%
အသေးစိတ်၏အသိအမြင် – 85.99%
ခွန်အား – 84.88%
လွတ်လပ်ခြင်း – 85.84%
တီထွင်မှု – 78.19%
analytical အတွေးအခေါ် – 76.01%